Kaominina Ambonivohitr’i Toamasina : tokantrano 420 nizarana sakafo | NewsMada
Nizara sakafo ho an’ireo fianakaviana sahirana miisa 420 ny ben’ny Tanàna ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Toamasina, Rakotonirina Nantenaina, omaly. Niarahana amin’ny mpiara-miombona antoka tamin’ny alalan’ny he­tsika «Tantsoroka» izay avy any Antananarivo ny nahafahana nanolotra ireo fanome­zana.
Niainga tany amin’ny fo­kontany ny lisitr’ireo nisitraka ny fanampiana. Nahitana mpatory an-tsena nafindra ao amin’ny Dojo ankehitriny. Tao ireo zokiolona ary ny hafa, fianakaviana sahirana eny ani­von’ny fokontany.
Nahitana vary 5 kg, sira, siramamy, savony ary paty ny fanomezana. Anjara andraikitry ny kaominina amin’ny alalan’ny sampandraharaha mikarakara ny sosialy ny fijerena sy ny fanaraha-maso ireo zokiolona sy sahirana fivelomana amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Mila tohana ireo ankohonana marefo ary mikatsaka mandrakariva ny fanampiana azy ireny ny ben’ny Tanàna, indrindra ao anatin’izao krizy sosialy ateraky ny valan’aretina Covid-19 izao.